Ukubamba uMoya wase-Iceland ngomgangatho omtsha weReykjavik woBunewunewu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukubamba uMoya wase-Iceland ngomgangatho omtsha weReykjavik woBunewunewu
Indawo echumileyo yokupheka eneendawo zokutyela ezipholileyo, ubomi basebusuku obuqengqelekayo kunye nomdlalo weqonga womculo, indawo ebonakalayo ikhanya ngokuqaqambileyo kwidolophu eyidolophu yase-Iceland kwaye, ngokucokisekileyo okuqhelekileyo, ukufika kweReykjavik EDITION iqinisa ngakumbi UHLELO lweehotele ukukwazi ukuhlala kwindawo nje. indawo elungileyo ngexesha elifanelekileyo.
"IReykjavik sisixeko esipholileyo, esincinci - esilungele uhlobo lwethu," utshilo u-Ian Schrager, uvulindlela onombono wembono yehotele ye-boutique, uMyili WWONKE-WONKE kunye noHLELO. "Sicinga ukuba eli lixesha likaReykjavik kwaye silapha kanye kanye nangexesha elifanelekileyo."
Ivulwa kumboniso ngoNovemba 9, 2021, UHLELO lweReykjavik luza kumisela umgangatho omtsha njengamava ehotele yodidi lwenene esixekweni, ukudibanisa eyona dolophu inkulu ye-Icelandic namava obuqu, asondeleleneyo kunye namava omntu ngamnye eyaziwa ngawo uphawu lwe-EDITION. Isiphumo siyindawo yedolophu edlamkileyo nephucukileyo enamagumbi angama-253, uluhlu olubalaseleyo lweebha, indawo yokutyela etyikityiweyo kunye neklabhu yasebusuku kwaye, ngokwenyani UHLELO lwesitayile, ukwaziswa kohlobo olutsha lwengcamango yentlalontle yanamhlanje. Kumhlaba wemithombo eshushu, amanzi eeminerali kunye neefjords zendalo, olu tshintsho lokuyila, amava eemvakalelo ze-visceral kunye nokunyaniseka kuka-Ian Schrager, kunye nobuchule obudala be-Marriott International kunye nokufikelela kwihlabathi jikelele, kukhokelela kumnikelo owahluke ngokupheleleyo okhulisa ngakumbi ukukhula kukaReykjavik. umtsalane njengendawo ekumgangatho wehlabathi yokusingwa kwezizwe ngezizwe.
I-Iceland yindawo yokusingwa enqwenelekayo yabaninzi, phakathi koMntla Merika kunye neNtshona Yurophu - ukonyuka kweendlela zokuhamba ngenqwelomoya, kunye nenkangeleko yelizwe langaphandle, etsala abatyeleli abavela kude nakude. I-Reykjavik EDITION lolona phawu lokuqala lokwenene lobunewunewu olungena kwimarike enamaziko kunye neenkonzo ezingafaniyo nezinye. Eqala ukubonakala kwimephu xa umakhulu wechess waseMelika uBobby Fischer ephumelela iWorld Chess Championship eReykjavik ngo-1972, uSchrager, owayelandela lo msitho ngelo xesha, uthi wakhwankqiswa bubuhle belizwe obungonakaliswanga, bendalo. Inene, ithotywe kuLwandlekazi lweAtlantiki eMantla, ngaphantsi nje kweArctic Circle, i-Iceland ikwimeko yokwenyani, imbonakalo yayo yomhlaba ehlala iguquguquka ngenxa yentaba-mlilo edumayo, imithombo eshushu egqabhukileyo, iigiza ezidubulayo kunye neetectonic plates eziguqukayo. Konke oku kube nesiphumo esihle, esingaqondakaliyo samasimi odaka oluluhlaza olugqunywe yi-moss-khaphethi, umkhenkce onyukayo kunye neentaba ezimagqagala ezicandwe ziintlambo ezinzulu, ezisikwe yimilambo. USchrager uthi: “EIceland, ubona izinto ongayi kuzibona kwenye indawo. “Ngaphezulu kunayo nayiphi na enye indawo emhlabeni, lithuba lokwenyani lokunxibelelana nomhlaba kunye nendalo kwaye sinebhongo ekwandiseni ngakumbi uphawu lwe-EDITION kwindawo engakholelekiyo enehotele enika umdla ngendlela emangalisayo ekunika imvakalelo yokwenyani indawo.”
Esebenzisa i-Midas touch yakhe, u-Ian Schrager uye wakhawula ngononophelo, wacinga kwaye wacwangcisa ihotele ukwenza i-alchemy kunye nengqiqo yomlingo okhethekileyo kule hotele. I-EDITION yeReykjavik eyilwe ngokubambisana nefemu yendawo yokwakha, i-T.ark kunye ne-studio esekwe eNew York, iRoman kunye neWilliams kunye nesikhokelo se-ISC (Ian Schrager Company) ukuyila, ibamba ngobuqili umoya weReykjavik ngelixa inqanda i-clichés kwaye ihlale igxininisekile i-EDITION imvakalelo eyomeleleyo yebrand yobuchule obusulungekileyo kunye nesimbo. Kwi-perch esecaleni kwezibuko, ngokuchasene nembonakalo yeentaba ezizukileyo, ihotele ikwindawo engenasiphako kumbindi wesixeko: ikufuphi neHarpa, iholo yekonsathi ephawulekayo kunye neziko lenkomfa-ifaçade yayo yeglasi enemibala emininzi yayiyilwe ngumzobi odumileyo waseIceland noDanish u-Olafur. U-Eliasson - kunye nemizuzu nje ukusuka eLaugavegur, isitrato esikhulu sokuthenga edolophini yaseReykjavik.
Ukusuka ngaphandle, UHLELO lweReykjavik lulongezelelo olumangalisayo kule ngingqi yedolophu. I-ebony façade yayo ye-shou sugi ban timber iye yatshiselwa ukuba yenziwe mnyama kusetyenziswa indlela yakudala yase-Japan, kwaye iifreyimu zentsimbi ezenziwe mnyama yinto yokunqwala okucacileyo kumhlaba omangalisayo we-lava yase-Iceland. Iindlela ezilula, ezicocekileyo zesakhiwo ngokwaso ziye zajikwa ukwenza eyona mboniselo kunye nesetingi saso esidlamkileyo se-harborside enendawo yokungena kabini efikelelekayo nokuba ngabahambi ngeenyawo i-Harpa plaza, okanye i-Harbour. Eyokugqibela - ngengqiqo enkulu yokufika efana ne-Times Square EDITION - ibonisa i-canopy, i-underside yayo ekhanyiswe yi-12,210 yeglasi ye-LED.
Njengazo zonke iihotele ze-EDITION, i-lobby yindawo eguqukayo, yentlalontle eveza ngokufihlakeleyo imvakalelo yendawo kunye nokuqonda kwexesha. Apha, ilitye le-basalt - okanye ilitye le-volcanic - livelele, libonakala kumgangatho ophantsi, obekwe ngepatheni eyinkimbinkimbi ephefumlelwe yijometri yase-Icelandic, kunye nedesksi yokwamkela i-sculptural standout. Kwindawo esembindini yokwamkela iindwendwe, iqela le-ISC longeze itotem eqingqiweyo yelitye lase-Icelandic lava ukulungelelanisa izinto ezifudumeleyo ezifana nesikhumba esibambekayo sesali ebhijelwe kwiikholamu zekhonkrithi- kunye nomgangatho omhlophe we-oki, imiqadi yesilingi kunye ne-slats, esecaleni kwebar yelobby. Imenyu yesiselo sebha ye-Lobby igxile kwiiwayini zehlabathi ngokukhetha iglasi kunye neecocktails zakudala ezine-Icelandic twist. Indawo yokuphumla inendawo yomlilo evulekileyo ephakathi nendawo, ejikelezwe yindawo yokuhlala kunye nengqokelela yefenitshala eyenziwe ngokwesiqhelo kumaqela ahlala abantu abasondeleleneyo, njengesihlalo esiphefumlelweyo sikaJean-Michel Frank kwi-white shearling kunye noPierre Jeanneret. -izitulo eziphefumlelweyo kwivelvet emnyama. Njengamaxesha onke, kukho ugxininiso oluluqilima kukukhanya okufudumeleyo, okungathanga ngqo, okuye kwacingelwa ngokucinga ukudala ukukhanya okuthambileyo kunye nokukhanyisa impahla esisigxina efana nebhari kunye nedesika yolwamkelo kunye nezibane zomgangatho wobhedu omhlophe weChristian Liaigre ukudala ukufana nobucwebe. ukufakwa kwebhokisi.
Ngaphakathi ekungeneni kwehotele, i-ISC ibambisene namagcisa asekuhlaleni ukwenza umfanekiso we-totem we-stacked, columnar basalt slate ukusuka kumzantsi we-Iceland. Ukunyuka kufutshane neemitha ezine ukuphakama, ukuphefumlelwa komkroli kufunyanwa kwiiCairns zemveli ezisebenza njengeempawu zomhlaba kuwo wonke amaphandle ase-Iceland. Ikhanyiswe ngokumangalisayo ngombane kunye nokukhanya kwekhandlela kwaye ijikelezwe yibhentshi ye-basalt, i-totem ifakwe izikhumba zeegusha ezimnyama ezimnyama, i-damask emnyama kunye nemiqamelo yesilika, ibe yindawo yokuhlanganisana ukuze ibonwe kwaye ibonakale embindini we-lobby. Kanye ecaleni koku, ephefumlelwe ngumboniso we-aurora borealis (Izibane zaseMntla), i-ISC yenze imephu yevidiyo yeZibane zaseMntla kwaye yenze umzobo ontywiliselwayo, onemilinganiselo emithathu kunye nosemoyeni wedijithali wamaza amahle okudanisa aluhlaza namfusa. Ifakwe kwigumbi lokungena, ivuselela ukusabela kunye novakalelo, kufana nokubona isenzeko sendalo kwisibhakabhaka sasebusuku sase-Iceland… Siyibiza ngokuba ziZibane zaseMntla xa zifunwa.
Iyafikeleleka ukusuka kwindawo yokwamkela iindwendwe, umgangatho ophantsi ukwalikhaya leTides, indawo yokutyela etyikityiweyo enegumbi lokutyela labucala, kunye nekhefi enezinto ezibhakiweyo zasekhaya, kunye neTölt, ibar esondeleleneyo ethatha umkhondo wayo ukusuka kwigumbi lePunch eliphumelele ibhaso laseLondon EDITION. I-Tides, ene-terrace yangaphandle kunye nokungena kwayo emanzini, incediswa nguGunnar Karl Gíslason - umpheki osemva kweDill, indawo yokutyela edumileyo yaseReykjavik yeNordic Michelin eneenkwenkwezi. Izinto zangaphakathi ezityebileyo neziphucukileyo zithathelwe ingqalelo ngotshintsho olungenamthungo ukusuka kwimini ukuya kubusuku, zineefestile ezisezantsi ukuya kwisilingi ezithi, ngexesha lasemini, zikhanyise ukukhanya kwendalo kwiikholamu zekhonkrithi eziphaphazelayo kunye neenkcukacha zomthi wothuthu olufakwe ioyile ezifana neepaneli ezikhanyiswe ngokumangalisayo. , impahla eyahlukahlukeneyo, kunye nentsimbi esembindini emile okwehexagonal exhonywe isikhanyiso sobhedu nealabhasta esenziwe ngokwesiqhelo ligcisa elaziwayo laseFransi, uEric Schmitt. Ekuseni, isidlo sakusasa ngumxube omtsha, onempilo weejusi ezicocekileyo, i-pastries, iziqhamo, i-cereal kunye ne-skyr (yogathi yase-Icelandic) eyongezwa kwimenyu ye-à la carte yezitya ezishushu kunye nokukhethwa kweesandwich ezivulekileyo zobuso. Kwisidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa, iGíslason ibonelela ngokutya kwe-Icelandic yanamhlanje, kunye neengcebiso ezifihlakeleyo zeendlela zokupheka zesiNtu, ezigxile kwiimveliso zamaxesha onyaka zasekhaya kunye nomgangatho ophezulu wezithako zehlabathi ikakhulu eziphekwe emlilweni ovulekileyo. Ecaleni koluhlu olubanzi lwewayini yehlabathi, lindela izitya ezinje ngesaladi ethe nkqo egalelwe amakhowa e-oyster eqhotsiweyo esele ineminyaka yobudala yesosi yesoya kunye neealmondi ezigcadiweyo, i-Arctic char epheleleyo efakwe ilamuni, idill kunye negalikhi ibhotolo, icod ebhakiweyo yeAtlantiki, iitapile ezigcadiweyo, imifuno exutyiweyo kunye nebhotolo. igxalaba lemvana braised kwaye yacotha yosiwe, itswele ezipickled mint kunye nama-apile, kunye dessert, Tides umnqathe cake, buttermilk ice-cream, umnqathe kunye sea buckthorn jam, kunye caraway oyile egcadiweyo. Kukwakho nemenu ye-brunch yempelaveki kunye nobusuku obuthathu ngeveki, i-Counter, ejongene nekhitshi evulekileyo yemidlalo yeqonga, iya kunika imenyu yokungcamla yezifundo ezisibhozo kunye neeperiles zewayini ukuya kuthi ga kwi-10 yabantu. Ngeli xesha abo bafuna into eqhelekileyo banokungena kwivenkile yokubhaka kunye nekhefi ukuze bafumane ikofu kunye nokhetho lwe-crowberry scones esandula kubhakwa ukuya kumgubo omuncu omnandi okanye iisandwich zesonka se-rye apho iindwendwe zinokutyela okanye zihambe.
Kwelinye icala legumbi lokwamkela iindwendwe, kude namehlo abonayo, uTölt - ogama lakhe libalaseleyo lamahashe e-Icelandic aziwa kakhulu - yibha epholileyo, eyilwe njengendawo efihliweyo eneendawo ezintathu ezisondeleleneyo ezineeraphu ezimibalabala ezinepateni ephefumlelweyo. ngokwejometri yesi-Icelandic, iindonga zetambour yeteak, iidiliya ezitshisiweyo eziorenji kunye neeponi zeenwele ezijikeleze indawo yomlilo. Ngaphandle kweealcoves, indawo igqunywe ngeepaneli zesilingi ezityebileyo, kunye nomgangatho, i-walnut chandelier eyenziwe ngokwezifiso kunye neefestile ezisezantsi ukuya eluphahleni ezibeka umbono weHarpa. Ngasemva kwebhastile eluhlaza enebhastile ekhanyiswe ngasemva kukho iishelfu zebronzi ezindala ezixhonywe kwisilingi, ezenza ukukhanya okufudumeleyo phantsi kwazo ukonwabela imenyu yeecocktails eziphefumlelwe yinkcubeko yase-Icelandic usebenzisa imimoya yase-Icelandic.
Isetelwe ukuba ibe yindawo yayo, iRoof ibekwe kumgangatho we-7 wehotele kwaye inikezela ngentaba yepanoramic, uLwandlekazi lweAtlantiki eMantla kunye nedolophu endala. Indawo eguquguqukayo enokwahlulwa ngocango lweglasi kwimisitho yabucala ivumela ukuba ibe yeyona ndawo ilungileyo apho ukonwabela iingokuhlwa eziqaqambileyo zasehlotyeni ezingapheliyo kunye nezibane zomlingo zasentla kwiinyanga ezibandayo. Iingcango zeglasi ezikumgangatho osezantsi ukuya eluphahleni zivuleleke kwithambeka elikhulu elijikeleze ixesha lonyaka langaphandle, elithe saa elinendawo yokuhlala etofotofo kunye nomgodi omkhulu womlilo, ngelixa izinto zangaphakathi ezimnyama ezimnyama zenza imvelaphi elumkileyo engaphazamisi kwimibono. Apha, i-casual vibe yongezwa yimenyu encinci yokutya okuthuthuzelayo okufana neeflatbreads ezosiweyo, iisandwich ezithosiweyo kunye neesaladi ezintsha. Ukusuka kule ndawo, kuyabonakala ukuba u-Ian Schrager wayila ihotele ngokusekelwe kwiimbono ezivela kwipropati.
Isombuluka ngaphaya kwemigangatho ephantsi kophahla, amagumbi ehotele angama-253 kunye neesuti ziyilwe njengeendawo zokuhlala ezifudumeleyo, nganye ineebhedi zayo ezijonge kumgangatho ukuya kwisilingi ezenza iimbono ezahlukeneyo zengingqi engqongileyo. Abanye beza bephelele kunye nethayili yangaphandle, ngelixa zonke zingumzekelo wendlela yophawu lwe-EDITION kubunewunewu bale mihla kunye nencasa efihlakeleyo yasekhaya. Iphalethi ecinyiweyo yomthi womlotha kunye nengwevu ye-oki ephaphathekileyo isebenza njengesiseko esifudumeleyo sodonga lwesamente yesamente, ifenitshala eyenziwe ngokwesiko lase-Italiyane, ibhedi yobhedu, iiragi zoboya be-faux, kunye nemizobo kunye nezixhobo ezivela kumagcisa asekuhlaleni, njengebhedi enemibalabala. iphoswe yinkampani yoboya bendawo, i-Ístex, iiseramikhi zomculi u-Guðbjörg Káradóttir, kunye negumbi lobugcisa ngamagcisa adumileyo ase-Icelandic Pall Stefansson kunye noRagnar Axelsson bebonisa imihlaba yase-Icelandic, ikhethekileyo I-EDITION. Ngeli xesha, amagumbi okuhlambela e-monochrome aneethayile ezenziwe ngesandla ezimhlophe zeseramikhi ezenziwe e-Italiya, zifakwe ngento engento yebhastile emhlophe, izincedisi ezimnyama matte, kunye nokufakwa ecaleni kwezindlu zangasese zeLe Labo zevumba elikhethekileyo le-EDITION. Ukusuka kwindawo yayo ephambili yekona kumgangatho we-6, iPenthouse Suite enegumbi elinye lokulala - enendawo yayo yabucala inezibuko elihle, iHarpa kunye nembonakalo yentaba edityaniswa ngakumbi nokukhanya okugcweleyo okungaphakathi kwefenitshala yesiko elimnandi kwiithoni ze-oatmeal. I-Penthouse Suite ikwanegumbi lokuhlambela elinobukhulu obugqithileyo kunye nebhastile elimhlophe lase-Italiya kunye nendawo yomlilo ephakathi.
I-Reykjavik EDITION inikezela ngeendawo zokuhlangana zangoku kunye nemisitho, kubandakanywa izitudiyo eziguquguqukayo, igumbi lebhodi elinokukhanya kwendalo, i-bleach oat-wide plannk floorings, kunye ne-ballroom enkulu enendawo yokusebenza kwangaphambili. I-ballroom eguquguqukayo kunye ne-floor-to-ceiling glass windows inokwahlulwa ibe ngamacandelo amabini ahlukeneyo, ngelixa iingcango ezinkulu zeglasi zibanzi ngokwaneleyo ukulungiselela imoto. Ngaphakathi kwe-ballroom kukho i-alabaster chandelier ejingayo edityaniswe ne-overwraps yendalo ejikeleze i-ballroom.
Umgangatho ophantsi osezantsi yindlu ye-Sunset, evula kamva kulo nyaka, indawo epholileyo yangaphantsi komhlaba kunye nenkqubo yesandi se-state-of-the-art kunye nokukhanya kwemidlalo yeqonga ekhanyisa i-concrete yangaphakathi emnyama kunye ne-edgy emnyama kunye ne-bar yekhonkrithi emnyama. Ukutshona kwelanga kunokwahlulwa zibe zizithuba ezintathu kunye nokufikelela kwihotele kunye neHarpa square. Kunye nemenyu ye-cocktail yokubulala kunye noluhlu oluqhubekayo lweziganeko, iklabhu iya kudlala i-host yezinye ze-DJs eziphezulu zehlabathi kunye nabadlali, ibeka ingqalelo njengendawo yamva nje engasayi kuphoswa kwindawo ye-nightlife yase-Reykjavik. Kukwakho nendawo yokungena yabucala kwabo badinga eyona ngqiqo inkulu. “Ibiya kuba liphupha ukuba ndivule iStudio 54 apha apho ubumnyama buthatha iinyanga ezi-6 kuneeyure ezisi-8 njengoko zisenza kwisiXeko saseNew York. Ibiya kuba yeyona ndawo ifanelekileyo kuyo,” utshilo uSchrager.
Kwakhona, kumgangatho ongaphantsi komhlaba kukho indawo yokuzivocavoca, ekhutshwe ngoqeqesho lwamandla amnyama, ubunzima, kunye nezixhobo ze-cardio, nangona kunjalo, ingcamango yentlalontle kwi-Spa yenye yezona zinto zikhethekileyo. imiba ehotele kwaye imisela ngokwenene UHLELO lweReykjavik ngokwahlukileyo. Ecaleni kwamagumbi amathathu onyango, i-hammam, igumbi lomphunga, i-sauna, kunye ne-plunge pool ebonelela nge-hydrotherapy, kukwakho indawo yokuphumla esembindini enendawo ye-spa, ethi ngemini ibonelele ngemenyu entsha esempilweni yokushukuma kweViking, i-champagnes kunye ne-moss emnandi. i-vodka infusions ecaleni kokutya okutyiwayo okufana nesonka sentaba-mlilo enetyuwa yelava emnyama. Oku konwatyelwa kakhulu kwidama lokutshiza lamanzi eGeothermal kunye nemizuzu engama-60 yonyango lwe-Sundown Spa, oluquka ukuthanjiswa komzimba okuvuselelayo kunye nokuphululwa kwentloko ye-onyx epholileyo. Ibekwe ngokuthe ngqo ngokuchasene ne-Sunset, i-Spa yeyona ndawo ifanelekileyo yokuzonwabisa yangaphambi kwetheko ukuze ulungiselele ngokugqibeleleyo ubusuku obuyindumasi bokuzonwabisa. “Indawo ye-spa kunye nezempilo enebhari yinto esingazange siyibone ngaphambili,” utshilo uSchrager. “Kodwa ukuya ezantsi ukuya konwaba nokusela emva koko ungene kumanzi ashushu, kwakhona, yimpendulo yokuba se-Iceland. Kwaye ukudibanisa oku ngendlela enencasa neyobuhle kuxhasa into emalunga nebrendi ye-EDITION.